पोखरामा थप ४ जना कोरोना संक्रमितको निधन – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा ……. पोखरामा थप ४ जना कोरोना संक्रमितको निधन – SamayaNepal | हरेक सत्य तथ्य खबरमा …….
पोखरामा थप ४ जना कोरोना संक्रमितको निधन
पोखरामा थप ४ जना कोरोना संक्रमितको निधन भएको छ । स्वास्थ्य निर्देशानलय गण्डकी प्रदेशले जारी गरेको प्रेसनोटमा आइतवार बेलुका ३ जना र सोमबार बिहान १ जना गरी ४ जनाको निधन भएको जानकारी दिए । निधन हुनेमा २ महिला र २ पुरुष रहेका छन ।
निर्देशानलयका अनुसार निधन हुनेमा पोखरा महानगरपालिका वडा न १७ का ७४ वर्षीय महिला रहेका छन । उनको २३ गते आइतवार बेलुका ६ :१८ मा गण्डकी मेडिकल कलेजमा निधन भएको हो । उनलाई २३ गतै नै कोरोना पुष्टि भएको थियो ।
गण्डकी मेडिकलमै अर्का सोमवार बिहान पोखरा ११ का ६० बर्षीय पुरुषको निधन भएको छ । १६ गते कोरोना पुष्टि भएका उनको बिहान १० :१३ मा निधन भएको हो ।यसै गरी फिष्टेल अस्पतालमा अर्का कोरोना संक्रमित पोखरा १० का ८६ बर्षीय पुरुषको निधन भएको छ । १९ गते कोरोना पुष्टि भएका उनकोसोमबार बेलुका ११ :४१ मा निधन भएको हो । यसै गरी सोमबार बेलुका नै मणिपाल शिक्षण अस्पतालमा ८२ बर्षीय महिलाको निधन भएको हो । उनको सोमबारबेलुका ६ :५० मा निधन भएको हो भने उनलाई आइतवार २२ गते मात्र कोरोना पुष्टि भएको थियो । यो सँगै गण्डकी प्रदेशमा कोरोनाबाट निधन हुनेको सङ्ख्या १११ पुगेको छ ।
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको November 9, 2020 November 25, 2020 455 Viewed